ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကသွားခဲ့တဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်မှတ်တမ်းလေးကိုအမှတ်တရချပြရင်း နှင်းဆီညီအစ်ကိုတွေနဲ့ လူငယ်သဘာဝအဆော့လွန်ခဲ့ပုံကို ပြသလာတဲ့ နေတိုး – Askstyle
ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကသွားခဲ့တဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်မှတ်တမ်းလေးကိုအမှတ်တရချပြရင်း နှင်းဆီညီအစ်ကိုတွေနဲ့ လူငယ်သဘာဝအဆော့လွန်ခဲ့ပုံကို ပြသလာတဲ့ နေတိုး
မင္းသားေခ်ာ ေနတိုးက အေနေအးၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိသူမို႔ပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အားေပးမႈကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္းေတြ ရပ္နားထားတဲ့ ေနတိုးက ပရိသတ္ေတြအတြက္ သူ့ရဲ့ ခရီးသြား အမွတ္တရ ဗီဒီယိုေလးေတြကိုၾကည့္ရေအာင္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာလည္း ေနတိုးက (၂၀၁၂) ခုနွစ္က နွင္းဆီညီအစ္ကိုေတြနဲ့အတူတူသြားခဲ့ ဥေရာပခရီးစဥ္ေလးကို တင္ဆက္ေပးလာပါတယ္။
ေေနတိုးက “ဒီခရီးသြားအစီအစဥ္အ​ေဟာင္းေလးကို New Version ​ေလးျပန္လုပ္​​ေပးရတာက​ေတာ့ အခုလိုကာလမွာ အိမ္မွာေနရတဲ့အခ်ိန္​ေတြမ်ားလာျခင္း​ေၾကာင့္ ျဖစ္​ေပၚ​ေနတဲ့စိတ္မြန္းက်ပ္မႈ​ေတြကို ဝင္ၾကည့္မိတဲ့အခ်ိန္ခဏတာအတြင္းမွာ စိတ္လြတ္လပ္​ေပါ့ပါးၿပီး အပန္း​ေျပ​ေစဖို႔ရည္႐ြယ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ၿပီးေတာ့ ကြၽန္​ေတာ္ကိုယ္တိုင္ camera ကိုင္႐ိုက္ကူးထားရတာျဖစ္လို႔ကြၽန္​ေတာ့္အျမင္​ေတြကိုသာ 90% ဦးစား​ေပး႐ိုက္ကူးထား​တဲ့အစီအစဥ္​ေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္္။ မွတ္ခ်က္ / အခုအစီအစဥ္​ကိုေနာက္ဆုံးသြား​ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ Paris ၿမိဳ႕က​ေနအ​ေရွ႕ကိုေျပာင္းျပန္​ ေဖာ္ျပ​​ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကဲ ! …. (ဒိန္းမက္ ) ႏွင့္ (နယ္သာလန္ ) ၿပီး​ေတာ့ ဥ​ေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကြၽန္​ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ​ ေလွ်ာက္လည္ၾကရ​ေအာင္ 2012 julyတုန္းကတည္းက႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္လို႔လူငယ္တို႔ရဲ႕သ​ေဘာသဘာဝအရ​ေဆာ့တာ​ေလး​ေတြပါ​ေနတာကို​ေတာ့ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ” ဆိုျပီး သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို မွ်ေဝေပးလာပါတယ္။
ေနတိုးတို့ကေတာ့ ဥေရာပနိုင္ငံေတြကို အျငိမ့္သြားကရင္းနဲ့ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ျမိဳ့ၾကီးေတြမွာ ေပ်ာ္စရာအမွတ္တရေတြအမ်ားၾကီးရိွခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ေနတိုးတို့ ဗီဒီယိုေလးကိုၾကည့္ျပီး ဥေရာပျမိဳ့ၾကီးေတြဆီ ကိုယ္တိုင္ေရာက္ရိွသြားသလို ခံစားရမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
မင်းသားချော နေတိုးက အနေအေးပြီး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသူမို့ပရိသတ်ပေါင်းများစွာရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေ ရပ်နားထားတဲ့ နေတိုးက ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့ ခရီးသွား အမှတ်တရ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရအောင် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း နေတိုးက (၂၀၁၂) ခုနှစ်က နှင်းဆီညီအစ်ကိုတွေနဲ့အတူတူသွားခဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်လေးကို တင်ဆက်ပေးလာပါတယ်။
နေတိုးက “ဒီခရီးသွားအစီအစဉ်အဟောင်းလေးကို New Version လေးပြန်လုပ်ပေးရတာကတော့ အခုလိုကာလမှာ အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်တွေများလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်မွန်းကျပ်မှုတွေကို ဝင်ကြည့်မိတဲ့အချိန်ခဏတာအတွင်းမှာ စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး အပန်းပြေစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် camera ကိုင်ရိုက်ကူးထားရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော့်အမြင်တွေကိုသာ 90% ဦးစားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် / အခုအစီအစဉ်ကိုနောက်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ Paris မြို့ကနေအရှေ့ကိုပြောင်းပြန် ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကဲ ! …. (ဒိန်းမက် ) နှင့် (နယ်သာလန် ) ပြီးတော့ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လျှောက်လည်ကြရအောင် 2012 julyတုန်းကတည်းကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့လူငယ်တို့ရဲ့သဘောသဘာဝအရဆော့တာလေးတွေပါနေတာကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
နေတိုးတို့ကတော့ ဥရောပနိုင်ငံတွေကို အငြိမ့်သွားကရင်းနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ပျော်စရာအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေတိုးတို့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး ဥရောပမြို့ကြီးတွေဆီ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိသွားသလို ခံစားရမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။